IINGCAMANGO ZOYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA (ICANDELO LESI-3) ZALE MIHLA, ZALE MIHLA KUNYE NEZEMVELI - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela (Icandelo lesi-3) zale mihla, zale mihla kunye nezeMveli
Wamkelekile kwinxalenye 3 yegumbi lokuhlambela lokuyila igalari yezimvo. (Cofa apha ukuze ufumane Uyilo lwegumbi lokuhlambela Icandelo 1 okanye Uyilo lwegumbi lokuhlambela Icandelo 2 Apha ngezantsi sabelana ngoyilo lwangaphakathi lwangoku, lwangoku kunye nesiko lokuhlambela lemveli. Uza kubona iindawo ezahlukeneyo ezibonisa iintlobo ezahlukeneyo zeethayile zodonga kunye nodonga, kunye neebhafu ezivaliweyo nezime simahla zokukunceda ufumane isitayile esikulungele.
Le yangasese yanamhlanje isebenzisa izinto ezincinci njengokugqiba, kodwa yenza iziphumo ezilula nezinomtsalane. Iithayile ezisetyenzisiweyo ngamatye endalo kumthunzi onombala omdaka omdaka, kuwo omabini umgangatho nakudonga. - iindonga zisebenzisa ukusika okucothayo kweethayile xa kuthelekiswa nomgangatho we-60 × 60 esetyenziswe kwimigangatho. Amampunge amabini aqukethe ibhloko ye-quartz enombala okhilimu kunye neesinki ezimbini zeesitya ezenziwe kwinto enye ye-quartz.
Igumbi lokuhlambela elinobunkunkqele lidibanisa izinto zesintu kunye nezinto ezinje ngezi zangoku, ukuhlaziya inkangeleko kunye nokwenza ngcono isibheno sayo ngaphandle kokukhangeleka kungalungelelananga. Uninzi lweenkcukacha zokwakha zigcina imigangatho emhlophe yemabhile emhlophe, i-wood cornice kunye neepaneli, kunye neengcango ezinamapulangwe zakudala ezisetyenziselwa amampunge, umbhoxo wendawo yemveli, kunye namalaphu asetyenziswa kwifenitshala kunye namakhethini. Ukuhlaziywa komtsalane weklasikhi wale ndawo yokuhlambela kunokubonwa ezindongeni. Imifanekiso yoqobo yamaphephadonga yathathelwa indawo yile mihla - iphepha lodonga lekhonkrithi elinombala ogqityiweyo, kunye neethayile zelitye zendalo ezilungele imarble. Umdibaniso wezinto zale mihla kunye nezesiko ziyahlangana zenze le ndawo yokuhlambela intle. Imigca ecocekileyo kunye neendawo ezimenyezelayo ezikhoyo kula magumbi okuhlambela zenza kungathandabuzeki ukuba zezangoku kubuhle, kodwa khetha imibala engaphezulu yendalo ukuze uyenze ifudumale, yamkele ngakumbi isibheno. Imigangatho isebenzisa iithayile zemibala e-beige, ngelixa iindonga zisebenzisa iithayile ezimdaka ze-mauve ezingaphezulu. IKhabinethi yamampunge ilula kakhulu enemiphetho ethe nkqo, elukhuni, enezinto zokubala ezinombala wekhrimu ngombala onesinki engaphantsi kwentaba. Ibhafu yokuthambisa yongeza ukuthungwa okungaphezulu njengoko isebenzisa iithayile zemibala endaweni yeethayile zeceramic eziqhelekileyo zokubopha. Ubunewunewu obulula bokukhanya kwesibhakabhaka buzisa ubomi kule ndawo yokuhlambela ilula. Uninzi lwezixhobo zilula-iithayile ezingwevu ezindongeni, iithayile zomgangatho ezilungisiweyo kunye neetoni ezingwevu nezingqombela, kunye neetayile zomthi wefeksi kwizingwevu zebhafu ekhehliweyo. Ukongeza ubume obuninzi kunye nokushushubeza kwigumbi lokuhlambela kukusetyenziswa kwe-zebrawood laminates kuludonga oluxhomekeke kwinto engeloncedo, ibala elenziwe ngomthi kunye nesakhelo sesipili kunye nokugcinwa okulula okujikelezayo kwecala. Le yangasese yanamhlanje ifumana ubuhle bayo ekulula kwayo. Izinto ezisetyenzisiweyo zilula, kodwa iindlela ezahlukeneyo zokwenza ubomi. Ngaphandle, icandelo lokuqala elinokubonakala licandelo lebhafu yokuhlambela. Igqunywe ngethayile e-fauxwood engwevu, enesipili esikhulu esibekwe tye kwicala elinye, ngqo ngaphezulu kwebhafu yokuhlambela. Ukuqhubeka ngaphakathi kwicala lasekunene, icandelo lokuhlamba linokubonwa, apho iindonga kwelinye icala zigutyungelwe ziithayile zobhedu ze-fauxwood, ngelixa elinye icala ligqunywe ziithayile zobhedu. Olu donga lujikela ngaphandle malunga neenyawo enye ukusuka emgangathweni ukwenza indawo yokuhlala ngelixa uhlamba.
Le ndlu yokuhlambela isebenzisa izinto zesiko ukwenza imvakalelo yeklasikhi. Imigangatho kunye neendonga zigutyungelwe ngamaplanga acociweyo kumthi womthi wom-oki ngee-aksenti zeephatheni ezimenyezelayo ezime nkqo ngaphantsi kweetawuli. Ibhafu yokuhlambela kwelinye icala igutyungelwe kukugqiba okuluhlaza okuluhlaza okunemibala egudileyo yegolide, umdlalo kwizakhelo zegolide zezibuko kunye nemiboniso yezithombe exhonywe eludongeni. Ukunikezaubomi obungaphezulu emgangathweni, ikhaphethi yemveli ibekwa phezu kwayo.
Le yokuhlambela isibhakabhaka yenza indawo elungileyo yokuphumla, ngaphandle komsebenzi wayo njengendawo yokuhlambela, enezihlalo kunye netafile yekofu ebekwe kwicala elikude lokuhlambela. Imigangatho mihle ngokugqitywa kwayo kobhedu. Ukugqitywa kweenkuni ze-wengue kwindawo yokuhlamba kufanelana ngokugqibeleleyo nalo mbala. I-wengue yeplanga enamabala yagubungela udonga kwaye yongezwa ngesipili esikhulu esinezibane ezityheli. Ukukhanya okumthubi kufana neesofa ezihleli kwindawo enye ezongeza umbala kwimibala engathathi hlangothi. Igumbi limhlophe kakhulu nangona ikhabhathi, isinki, ibhafu kunye neendonga ezinombala zonke zigutyungelwe ngumbala omhlophe oqinileyo. Le ndlu yangasese yakudala ivulekile kwaye igcwele izinto zesiko. Indalo kunye nobuhle budityaniswa neentsika zomthi ezixhasa icala lasekunene legumbi, zihlanjwe ngamaplanga omthi nazo zigubungela icandelo elinye lodonga. Iziqwenga ezintle ezifana nekhandlela legolide elinezibane ezimhlophe kunye nee-aksenti, ucango olukhulu lweplanga olunepateni yesikwere kwisiphelo segolide se-oki, kunye nekhethini elikhulu legolide eligubungele iphaneli ephezulu yefestile. Ibhafu yokuhlambela yesiko kodwa engenanto ngombala omhlophe oqinileyo kodwa umaleko ongaphandle obhalwe ngesitywina sentsimbi ulele embindini wegumbi lokuhlambela.
Oku igumbi lokuhlambela elimhlophe elihle lwenziwa ikakhulu ngombala omhlophe, ngeethayile ezintle zemabhile ezigqume iindonga kunye nomgangatho. Ubume kwiithayile zemabhile zinika umbono okhethekileyo weklasi kunye nobuhle kwigumbi. Ikhabhinethi, i-countertop, kunye nebhafu yokuhlamba yonke imhlophe emhlophe, njengemfama kwiifestile. Iziqwenga zentsimbi kumbhobho, ishawa, isiphatho setawuli, kunye nesipili zigxininisa kwigumbi elimhlophe kakhulu, kwaye isipha seentyatyambo sinika ubomi kwisikimu sombala ofanayo.
Oku kunika umxube wokuziva okwangoku kunye nendalo kunye nokusetyenziswa kwezinto kunye nemibala.Iikhabhathi azinamthungo kwaye zilula kodwa zisebenza kakuhle ngombala we-oki. Iindonga ubukhulu becala zigutyungelwe ngombala oluhlaza kwaye opholileyo we-pastel lime, olincoma uvakalelo lwendalo olunikwa ziikhabhathi zokhuni. Iithayile zomgangatho zigqunywe ngeebhloko zokhilimu, ezimnyama, kunye neetiles zomthamo. Ngelixa indawo yeshawari iindonga zigutyungelwe ziithayile zesikimu sombala ofanayo. Iibhloko eziqinileyo zombala zongeza ukugxininisa kwigumbi kwaye zongeze i-vibe yanamhlanje kwimbala yendalo. Le ndlu yokuhlambela intle inika imvakalelo ecocekileyo necocekileyo ngombala wayo omhlophe kakhulu. Iindonga kunye ne-flooring zikwimhlophe eqinileyo, kwaye ibhafu yokuhlambela kunye nezinye iinxalenye zodonga kwicala layo zigutyungelwe ngamatye e-matte. Ubume bematte buqhubeka bunika imvakalelo eyomileyo necocekileyo ngaphakathi kule ndawo yokuhlambela. Kwelinye icala, umnyango weglasi uhlukanisa indawo yokuhlambela kwigumbi lonke. Izityalo eziluhlaza kwiimbiza ezimhlophe zisetyenziselwa ukugxininisa kwaye zinike umbala kule ndawo yokuhlambela.
Le ndlu yokuhlambela yenza imibala engathathi hlangothi, kodwa idlale kakuhle ngombala ukufezekisa isitayile sayo esahlukileyo nesidlalayo. Iindonga zigutyungelwe ngwevu eqinileyo, kwaye iikhabhathi kunye nokubiyelwa kwefestile zikwimhlophe eqinileyo. I-countertop ine-laminate yamatye e-brown eqinileyo, ngelixa i-flooring ihlanganiswe ngeethayile zomthunzi osondeleyo, kodwa ngokwahlukileyo. Indawo yokuhlamba igutyungelwe yipaneli yeglasi, kunye nesiqingatha sodonga olwahlula kwelinye icala. Umgangatho ongaphantsi kwendawo yokuhlamba ugqunywe ziithayile ezinombala omdaka, ongwevu, omnyama nomhlophe, ngelixa iindonga ngaphakathi kwendawo yokuhlamba zigqunywe ziithayile ezingwevu ezimnyama.
Le ndlu yokuhlambela ilula, i-chic, kwaye yeyala maxesha ngombala wayo ongwevu nomhlophe. iishelfu, iikhabhathi kunye nendlu yangasese zonke zinombala omhlophe oqinileyo, ngelixa iithayile ezigqume iindonga zikwiindidi ezahlukileyo ezingwevu nombala omdaka. Isitayela sokuhlambela sivela kwizinto ezahlukeneyo ezenziwe ngobungakanani beetayile kwicala ngalinye. Iithayile ezikhanyayo ezimdaka matte zincinci kwindawo yeshawari, zenza imvakalelo yokuphamba, ngelixa iithayile zikhulu kwindawo yangasese. Okokugqibela, yintoni enika ubomi kunye nobuhle kule ndawo yokuhlambela ukukhanya okwaneleyo kwezibane ezikhokelwayo.
Ulwabiwo # 1
Le ndlu yangasese intle ijikelezwe ziitoni ezishushu zegolide namdaka. Ibhafu ibile ngokuthe ngqo phakathi kweefestile ezimbini ezihonjiswe ngamakhethini egolide, umdlalo olungileyo kwiipompo nakwiziphatho zekhabinethi egumbini. Indawo leyo yayenziwe ngekhabhathi yeplanga kwi-cherrywood stain enemifanekiso entsonkothileyo kunye neempawu zegolide, ngelixa i-countertop yayo igutyungelwe ngamatye ansundu. Umgangatho ugqunywe ziithayile ezinemibala ye-oatmeal kunye neikhaphethi ezimbini ezincinci kumacala omabini ebhafu yokuhlambela, ukugcina igumbi lome kwaye licocekile.
izipho zekrisimesi ezilungileyo zomyeni
Isabelo # 2
Igumbi lokuhlambela elingaphandle libekwe ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela elifakwe kwiipaneli zeglasi kunye neentsika zombala oqinileyo wekhaki. Ibhafu yokuhlambela ilele embindini, ijonge inkangeleko yangaphandle ngaphandle, Umgangatho uneethayile zekhaki kumdlalo wokugqibela ohambelana nombala weentsika. Igumbi lilula kodwa liyasebenza kakhulu, apho kubekwa khona itafile enezinto ezibini eyenziwe ngokhuni ecaleni kwebhafu ukubamba izinto zokuhlamba.
Le ndlu yangasese yakudala igcwele izinto ezilula kodwa zemveli ezine-class vibe kodwa i-unisex vibe. Nangona igumbi lizele ziipateni kunye namaqhekeza emveli, indoda ayizukuziva ingaphandle kwendawo apha, kunye neskim semibala ethe grey, emnyama nomhlophe esinayo. Amakhethini angwevu ahlotshiswe ngemigca emnyama, ngelixa iikhabhathi zikwisengue nakwibala elinzulu le-oki. Ibhafu ijikelezwe ngamanqanaba amabini eqonga, ibonelela ngendawo yokuhlala kwindawo. Iqonga ngalinye lihlotshiswe ngeepateni zedayimani ezibekwe kufutshane nezinye. Elinye igumbi lihonjiswe ngeepateni ze-paisley ngegolide, ngwevu, nomnyama, kunye neglasi.
Isabelo # 3
Le yangasese yangoku yenza indawo yanamhlanje ngokusetyenziswa kakuhle kwejiyometri kunye noburhabaxa. Iifestile ezinkulu zoxande zilele ecaleni kwebhafu emhlophe eluxande, ejonge esixekweni. Ngelixa zonke iindonga zigutyungelwe ngomphetho oqinileyo ongwevu, isofa yokuhlalisa umntu omnye, imigangatho, kunye nendawo yokuhlamba zikwimdaka ngombala, ngokwahluka kugqityiwe. Isofa igqunywe ngokucocekileyo ngesikhumba esimdaka ngebala, ngelixa i-flooring ihonjiswe ngeepateni ezilukiweyo. Indawo yokuhlamba kwelinye icala igqunyiwe ngeplanga eqinileyo yomthi. Eminye imiphetho kunye nobume bunokufunyanwa kwizilivere kunye nezimnyama ezimnyama ezibambe iivases kunye neziqwenga zeglasi eziziingxande ezixhonywe ekupheleni kwekhandlela.
Isabelo # 4
Oku uyilo lwasekhaya lokuhlambela kudala ukukhohlisa kwendawo ngaphandle kwesithuba esincinci kunye nokusetyenziswa kweewindows ezinkulu kunye nezipili. Ibhafu emhlophe yokuhlambela ilele eqongeni eliphakamileyo eligutyungelwe ngeplastikhi yokhuni oluqinileyo eneephatheni ezimileyo ngelixa eminye imigangatho igqunywe ziipateni ezilukiweyo. Indawo yokuhlamba inesiphelo esomeleleyo se-fauxwood kwi-countertop kunye nekhabhathi emhlophe engenamthungo phantsi kwayo. Kwicala layo kukho itafile encinci yamampunge kunye nesipili sayo kunye nesihlalo kwigolide ebiyelweyo kunye nezinto ezimnyama.
Eli gumbi lokuhlambela eliyinkosi kunye negumbi lomgubo linika indawo efanelekileyo yokuphumla yokuthambisa yokwenza izithambiso kunye nokunxiba. Iikhabhathi ezintle zigqityiwe ngombala ococekileyo omhlophe kwaye zinika amathuba amaninzi okugcina. Ukuchukumisa okuhle kukukhanya kwe-satin ottoman eluhlaza okwesibhakabhaka embindini wegumbi elinika umbono wokunethezeka kwindawo. Ezinye izinto zokuma kwigumbi zibandakanya ukubunjwa kwesithsaba, ingilazi yeglasi, udonga oluntsonkothileyo, kunye nomgangatho omangalisayo weArabescato Statuary Marble.
Igumbi lokuhlambela elinobuchule kunye ne-oceanview emangalisayo. Ishawa enkulu yemvula inendawo ebiyelweyo engenakubonwa ngaphandle. Umgangatho omnandi wenziwe ngeSahara Gold emarmore emhlophe.
Igumbi lokuhlambela lendlu yokuhlala elinombonakalo ococekileyo omhlophe kunye nendawo yokuhlamba yeglasi yesiko. Iikhabhathi ziindlela zaseYurophu ezivela kwikhabhathi ePhakamileyo yaseDura evela koxinzelelo oluphezulu lwezinto zelaminate. Umgangatho omhle we-Pental Calacatta Caldia marble ophucuziweyo kwaye unika ingqiqo yokwenene kwindawo.
Enye yezinto zokuqala umntu aziqaphela kule ndawo yokuhlambela yinkosi yokukhanyisa i-whimsical round kunye ne-59 ″ Keren Acrylic Freestanding Tub. Ibhafu ijikelezwe yiArabescato Statuary Marble, ngelixa ikhabhinethi emhlophe ha ingaphezulu kweThasos White Marble. Iipili ezinkulu ezimhlophe ezifakwe ifestile kunye nefestile encinci ngaphezulu kwebhafu inceda ukukhanyisa nokwandisa indawo yamagumbi.
Ishawa kule ndawo yokuhlambela yangoku yinto entle. Ineentlobo ezimbini zethayile kubandakanya iTalt Dolophu yeSixeko ejonge iNeighbourhood Park ye-porcelain tile eludongeni olunye kunye ne-Daltile Clio Nox mosaic tile kwenye. Umgangatho owenziwe ngomthi wenziwe ngomthi we-teak kwaye ishawa enkulu enamanzi axhotyiswe ngentloko yentloko yemvula ye-LED.
Igumbi lokuhlambela elinomphezulu wangoku kunye ne-Salerno porcelain tile yokubhabha ebiyelweyo kunye nomgangatho wesilayidi. Iindonga zipeyintwe ngombala oqaqambileyo weBluebell kwaye ikhabinethi ifakwe isinki esikhulu soxande iQaurelo. Ibhafu yokuhlambela ye-whirlpool isethwe eludongeni olukude kwaye inikezela umbono ocacileyo wendawo yangasemva.
Le bhafu yokuhombisa ihonjiswe ngomgangatho wethayile yeglasi emdaka ngombala evela eBangkok kwaye inika umbono omangalisayo wangaphandle ukusuka ebhafini. Ibhafu ngokwayo yi-salon Spa whirlpool bathtub ene-travertine engqonge.
Le ndawo yokuhlambela yangoku enesitayile esinodonga olunomtsalane olwenziwe ngeethayile ze-porcelain ezizodwa. Ibhafu yeJacuzzi Luxury Pure Air Bathtub yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla emva kosuku olunzima. Ezinye izinto eziqaqambileyo zale ndawo zibandakanya izitya zentsimbi ezingenasinximbi zeDecolav ezingenanto ezingenanto kunye nesipili esikhulu sodonga.
Le ndlu yangasese yendlu yangasese ihlonyelwe ukuthandana namagqabi e-rose ecaleni kwetyhubhu, ukukhanya kwamakhandlela, kunye neentyatyambo zeeroses ezisandul 'ukusikwa. Amagqabantshintshi anomtsalane apha abandakanya ukuhonjiswa ngodonga lwepeyinti, isitya esimbini sokuntywila kunye neWhirlpool SPA Massage Tub. Umgangatho wethayile yibhasikithi yokuluka imibala ebizwa ngokuba yiCarrara White evela e-Itali.
Le ngcibi yokuhlambela yobugcisa inikezela ngebhafu emangalisayo eyenziwe ngezandla eyenziwe ngobhedu olukhandiweyo. Ukuqhubeka nomxholo kwikhabethe engelambeko isinki nayo ikwangubhedu kwaye ihleli kwisilayidi setyheli lenyengane emthubi. Umgangatho wethayile yombala wentlabathi yodongwe. Iindidi ezimbini zamatye odonga obhedu, iimpompo zamanzi zobhedu kunye nezinto ezinomtsalane Chandelier yangasese ukukhanyisa kukuncoma le ndawo yokuhlambela eyenzelwe ngobuchule.
Le bhafu yokuhlambela yangoku ikhanya ngokukhanya okuninzi kwendalo kuludwe olukhulu lweefestile zemifanekiso. Inemigangatho yeemabhile zegolide zeCalacatta ezimhlophe ezinesitayile sendabuko kunye nekhabhathi embhoxo.
Le bhafu yokujonga inkosi ijonga iintsika ezinkulu macala omabini ebhedi enkulu. Imiphezulu yeetafile kunye neendawo zokuhlambela zenziwe ngegranite emdaka ngetayile yomgangatho wephosilini. Udonga oluqaqambileyo kunye nezibane ezijingayo kumdlalo wokugqibela we-antique kakuhle kunye nomxholo omdaka kunye nomthubi gumbi.
Le nto yendabuko Indlu enkulu yokuhlambela Inophahla omde wetreyi onomtsalane kunye neekholamu kunye nokubumba kwesiko okunika ukubonakala kwendawo entle yokuphumla ye-spa. I-ottoman e-tufted ihleli phambi kweengcango ezintle zaseFrance kwaye ijikelezwe ziikhabhathi zombala we-cream ezingenanto. Ishawa enkulu yokuhamba kunye ne-step-up-tub inikezela ngamathuba amaninzi okuphumla kunye nokuhlaziya.
Indawo eqinileyo yokuhlamba ibhafu efumaneka kule ndawo yokuhlambela ivuza umsebenzisi ngombono omangalisayo wamanzi wangaphandle nangaselunxwemeni. Iifayile ze-porcelain ezenziwe ngomthi zibonelela ngenkangeleko yokhuni lokwenene kunye nokuqina kwethayile.
Le bhafu yokuhlambela ephezulu yindawo efanelekileyo yokuphumla ye-spa enezinto ezintle kunye nokuhombisa. Isinki engenanto yokuntywila ine-counter yekalika kunye nesiseko somthi kwaye iyayincoma indawo yokuphumla kunye nebhafu engqonge. Uninzi lweefestile luzisa imvakalelo yokuhlamba ngaphandle kwaye ikhandlela elikhulu elijingayo libonelela ngemvakalelo yokuziyolisa. Umgangatho wekhonkrithi omiselweyo uhambelana nobume bodonga ukuzisa olu luyilo lugqibeleleyo loyilo.
Le yanamhlanje Uyilo lokuhlambela elimnyama nelomhlophe ifaka ishawari kunye nesitya sokudibanisa esingenasiphelo. Indawo yokuhlambela ineethayile ezimhlophe zemveli ezichaseneyo nomnyama weshawa, indawo yangasese kunye nekhabhathi.
Igumbi lokuhlambela laseMeditera eliboniswe apha lineempawu zesiko ezinje ngombala we-cream cream, kunye ne-travertine flooring. Ibhafu enkulu inebhafu emhlophe emhlophe emhlophe kunye nethayile ebomvu ye-mosiac ejikeleze. Uphahla oluphakamileyo kunye nokukhanya kwesibhakabhaka kuzisa imvakalelo egumbini.
Ithayile emhlophe emhlophe emhlophe kule ndawo yokuhlambela ibonelela nge-spa enkulu njengokuziva kule ndawo yolwandle. Isixhobo sehardware iBrielle resin freestanding tub sihlala ekoneni apho sinokusebenzisa khona isiphumo esipheleleyo sombono ukwandisa ukonwaba kwakho. Ikhawuntari yeenkuni iphakathi kwengalo elula yokufikelela kwiitawuli kunye nezixhobo zokuhlamba onokuzidinga ngexesha lokuzonwabisa kwakho.
Le ndlu yokuhlambela inkulu ifuna ukuhoywa ngegolide kunye nombala wayo omdaka ngombala. Indawo yokuhlamba ikhangeleka intle kakhulu ngefreyimu yayo enkulu yegolide ephethe isibuko esikhulu kunye neekhabethe zecherrywood. Umgangatho ugqunywe ziithayile ezifudumeleyo ezinemibala ye-oatmeal, eneepateni ezifanayo ezizii-quadrangle ezineentanda kwibhafu yokuhlambela. Indawo yangasese yahlulwe yipaneli yeglasi, kwaye imida yimigca eneetayile ezimnyama ezimnyama ezinamabala amdaka. Iindonga zigqunywe ngeethayile ezinemibala ye-oatmeal, ezibonisa ukukhanya okungaphezulu njengendawo yegolide. Ifestile ilele ngqo ngaphezulu kwendlu yangasese kunye nebhafu, ejonge phezulu kwizakhiwo.
[yandisa isihloko = bonisa oovimba bolwazi swaptitle = Fihla oovimba bolwazi]
(1) IHickey Qhotsa ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(Mbini) Ukuhamba kwiplanethi yethu ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(3) Imvolulo ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(4) Imvolulo ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons) [/ yandisa]
Ukunceda ukuba nombono kunye nokwenza uyilo lwakho jonga kuqokelelo lwe Isoftware efanelekileyo yokulungisa indawo yangasese . Sebenzisa enye yezi nkqubo ungasebenzisa umfanekiso wesicwangciso sakho somgangatho, ukwenza uyilo kwaye uzame ukongeza imibala eyahlukeneyo, ukugqiba kunye nokuhombisa ukufumana uyilo olugqibeleleyo.
Ukuqhubela phambili uyise iingoma zomdaniso
ilokhwe yegolide kulundwendwe lomtshato
yimvula ngemini yomtshato wakho ithamsanqa
iingoma zomtshato werock umdaniso wokuqala
malini ukucebisa ngomfoti womtshato